Wabiga Shabelle oo fatahaada ka sameeyay deegaanno ka tirsan G.Sh/hoose |
Wabiga Shabelle oo fatahaada ka sameeyay deegaanno ka tirsan G.Sh/hoose
Deegaanno iyo Degmooyin ka tirsan Gobolka Shabelaha Hoose ayaa waxaa Fatahaad xoogan ka sameeyay Gobolka Sh/hoose.
Sida Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho uu u xaqiijiyay Guddoomiyaha Gobolka Sh/hoose C/qaadir Max’ed Nuur Siidii deegaanno iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Sh/hoose ayaa waxaa ku soo fatahay Wabiga Shabelle.
“ Deegaanada uu maro wabiga ee Gobolka Sh/hoose ka tirsan inta badan waxa saameyn xoogan ku reebay fatahaad uu sameeyay wabiga” ayuu yiri C/qaadir Siidii Guddoomiyaha Gobolka Sh/hoose.
Guddoomiyaha ayaa ugu baaqay Beesha Caalamka , Masuuliyiinta dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Gobolkaasi in Gurmad loo fidiyo dadka uu saameynta ku reebay Fatahaada uu sameeyay Wabiga Shabelle.
C/qaadir Siidii ayaa Dhanka kale soo dhaweeyay dib U Howl galista Idaacadda Shabelle isagoo carabka ku dhuftay in Idaacaddu ay wadato Magaca Gobolka uu Gobornatooraha ka yahay markii horena lagu aasaasay Magaalada Marka ee Xarunta Gobolkaasi Sh/hoose.